Uma ukuba azithinta ezindongeni zendlu, lapho wakhethwa njengosuku oshibhile amaminerali uvolo, kungaba inkinga yokuthi kwezinye izindawo izindonga kuyidambise. Ukuze ugweme nemiphumela emibi, kubalulekile ukusebenzisa ulwelwesi umusi permeable.
Inqubo nangokuvikela izindonga ilungiselelo ukufulela kuhilela ukusetshenziswa mafilimu lamapulangwe ngaphansi ungqimba yezimbiwa uvolo. Uma ngaphambi ukufudumala umsebenzi ungaphakathi, kubalulekile ukuhlinzeka yisithiyo umhwamuko. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa impahla esesikhundleni perforations noma ikhule ezimbotsheni. umhwamuko permeability Coefficient lesi sendlalelo kufanele kube omncane. Kungcono ukusebenzisa ifilimu eyenziwe polyethylene, okuyinto Zingagandelelwa.
Futhi ngeke engadingekile ucwecwe enamathela esekelwe aluminium. Akufanele sibakhohlwe ukuthi uma usebenzisa isithiyo umusi okudingeke ukuba akucabange mayelana nokuba khona ohlelweni ukupholisa. Kukhona ayatholakala emakhemisi futhi ekhethekile ifilimu, okuyinto sisetshenziswa anti-ukufingqa enamathela. Onjalo umusi ulwelwesi permeable ungakheka ukufingqa phezulu. Material ngokuvamile ibekwe ngaphansi izingqimba ezithandwa ukugqwala. Zihlanganisa lashukumisa ishidi, profiled futhi Tile metal (okokugcina ayinakho enamathela ovikelayo yangaphakathi).
Le filimu akuvumeli evala olumanzi ukufinyelela metal. Ngenxa yale njongo, ohlangothini reverse has a anolaka Indwangu ungqimba, okuyinto edingekayo ukuqoqa umswakama. Beka ifilimu nge anti-ukufingqa enamathela kumele izicubu side phansi, sandise cishe 2-6 cm kusukela ungqimba amaminerali uvolo. Labo ekwakheni ulwelwesi ukuthi luyakwazi ukuhwamuka, asetshenziselwa ukwahlukanisa of izindonga ngaphandle, avikela izinto kusuka umoya ipheshulwa futhi kungenziwa wabeka isandla ekwakhiweni uphahla bamisa. Ukusebenzisa kwabo kuyafaneleka futhi mbumbulu eyayivuza uma kudingeka ukubeka ungqimba okuvikela umswakama. Ukuze amanzi umusi permeability we ifilimu babe perforations futhi ikhule ezimbotsheni encanyana. Umswakama aqoqana ukwahlukanisa, ngizodabula uhlelo ukupholisa.
Izinhlobo ezinkulu umusi permeable ungangenisi amanzi ulwelwesi
Umusi permeable ulwelwesi kuyinto ngezinhlobo eziningi. Ziyakwazi:
presvdodiffuzionnogo uhlobo lwento;
Uhlobo lokuqala uyakwazi odlulayo 300 g umusi ngosuku. Le nkomba esihambelana imitha square ngayinye. Uma kuba ulwelwesi okusheshayo, amanzi umusi permeability Coefficient ziyahlukahluka kusuka 300 1000 g / m 2. Kulesi ulwelwesi sibalo superdiffuzionnye idlula 1000 g / m 2. Ngenxa yokuthi i-prevdodiffuzionnye ulwelwesi bavikelekile umswakama, angasetshenziswa ngaphansi kophahla ngesimo olwelwesini. Kufanele kube i igebe air phakathi ukwahlukanisa kanye ifilimu.
Lapho olungaphambili lwesonto ukwahlukanisa izinto ezinjalo kungenzeka ingasetshenziswa, njengoba bengaweli umusi. Phela, uma omile ngokwanele, kusukela emoyeni ku ezimbotsheni uthuli Ungafaka. Lokhu kuyoba yokuthi ifilimu iyeke "ukuphefumula", kanye condensate luhlala phezu ungqimba ukwahlukanisa.
Izibuyekezo we ulwelwesi umusi permeable
ulwelwesi umusi permeable kufanele libekwe phezu ubuchwepheshe ekhethekile. Uma kuziwa ukwanda okusheshayo noma Superdiffuzionnaya ulwelwesi, ezimbotsheni inkulu ngokwanele, ngakho pretty ngokushesha clog. Lokhu kwenze ukuba khona kwegebe emoyeni ngoba ukupholisa ohlangothini engezansi. Ngokusho abasebenzisi, ayinayo ukuba ingazihlupha kokufaka futhi esiphikisayo lathing. Sales zingatholakala hhayi kuphela nokuhanjiswa kwe- ifilimu, kodwa ukwehluka futhi ngakuthathu yalo. Njengoba kuveziwe ngabathengi, ungqimba for ukupholisa bathola ngaphakathi. Ngenxa yalesi ukufingqa akusiyo ukwazi ukuthola ngaphakathi kophahla metal. I yokusebenza isimiso elinama enjalo into efanayo we ifilimu anti-condensate. Nokho, kunomehluko. Njengoba ezicijile ekhaya master volumetric ulwelwesi ukwazi ukususa umswakama kusukela ukwahlukanisa. Ngempela, uma ophahleni metal has eyehlelayo kancane ku uhla kusuka 3 kuya ku-15 °, le condensate kusukela ohlangothini engezansi ngeke angena phansi. Kuyoba ukubhodloza enamathela zinc kanye ibhubhise ngokuphelele ke.
Indlela ukufaka ulwelwesi - nalamacembu kwangaphakathi noma elingaphandle ukwahlukanisa?
Umusi permeable ungangenisi amanzi ulwelwesi kumelwe nakanjani libekwe phezu inqubo ethile. Uma ufuna vimbela olungaphambili lwesonto, ifilimu elokususa umbhangqwana kufanele ibekwe ngaphandle. Ngokunjalo uma ngeke vimbela bophahla, ifilimu camera nge anti-condensate noma inqwaba okusheshayo uhlobo embondelene phezu noboya amaminerali. Kuyadingeka ukuba ulandele ubuchwepheshe isetshenziswa ukukhishwa mbumbulu umoya. Uma uphahla akanayo heater, ungqimba ifilimu kumele kube ezansi, ngaphansi kube semishayweni. Lapho zifudumele we kwakugqamuka amakamelo ngezansi elisophahleni umusi permeable ulwelwesi ukufakwa ngezansi ukwahlukanisa. Umusi permeable ungangenisi amanzi ulwelwesi kufanele usetshenziselwe yangaphakathi odongeni ukwahlukanisa. Kulokhu, akufanele perforated, wasibeka idinga ukuba phezulu amaminerali uvolo ngaphakathi egumbini.
Indlela isitayela diaphragm yakho - bephambene noma ukubhekana?
Njengoba umkhuba ubonisa, ke kuseyimpicabadala yini ohlangothini isitaki umusi permeable ulwelwesi kubantu abaningi. Uma ifilimu uyoba phambi efanayo futhi ohlangothini seamy, umbuzo ngokushesha asuswe. Nokho, awusebenzi ngaso sonke isikhathi nethuba ukuthola ukudayiswa amabili emaceleni tape. Uma kuziwa zinhlobo anti-condensate, kusuka ngaphakathi ngaphandle luluhlangothi lendwangu lapho obandayo ke kufanele akhanyiswe ekamelweni. Lapha kubalulekile ukudweba luthi alufane metal ulwelwesi ucwecwe.
Uma itholwe yi ulwelwesi okusheshayo kuyinto umhwamuko permeable ke udinga ufunde imiyalelo. Kujwayele kubonisa nomkhiqizi ukupakisha ubuchwepheshe impahla. Nokho, omunye futhi inkampani efanayo angakhiqiza itheyiphu olulodwa emaceleni futhi amabili emaceleni. Chaza yangaphandle futhi izinhlangothi kwangaphakathi kungaba ngombala. Uma ulwelwesi kukabili, omunye wabo ezinemibala e abe luhlaza elikhanyayo, ngokuvamile elingaphandle ohlangothini impahla.
Indlela ukukhetha ulwelwesi
Uma udinga umusi permeable ulwelwesi umoya namanzi-ubufakazi, khona-ke ungakwazi unake evame kakhulu ethengwa abathengi ukhetho "Izospan A", okuyinto senzelwe ukubeka esikhaleni ophahleni. It isetshenziswa ukuvikela ukufingqa nomoya izakhi izindonga nophahla ngesikhathi kwakhiwa isakhiwo. Ulwelwesi kufanele zitholakale ngaphansi isembozo ophahleni noma obondeni ebhekene ukwahlukanisa ngaphandle. Ohlangothini olungaphandle - amanzi-oxosha surface bushelelezi, kuyilapho yangaphakathi anti-condensate has a isakhiwo anolaka. Kuhloswe uyephuza umswakama kulandele ukuhwamuka ekusakazeni emoyeni. Lokhu umusi wumoya ulwelwesi permeable has a lula ukusetshenziswa, it has okusezingeni eliphezulu amandla mechanical nokuphepha kwemvelo. Ukhuphula izinkungu Awekho izinto eziyingozi, futhi izakhiwo impahla kungenziwa walondoloza isikhathi eside. Indaba amelana imiphumela amagciwane athile kanye amakhemikhali.
Izici ukustaka impahla "Izospan A"
umusi wumoya ulwelwesi permeable "Izospan A" lalisetshenziswa njengezaba ulwelwesi wumoya e bophahla ukuvuselelwa ukushisa ngci, okuyinto engela akufanele kube ngaphansi kuka-35 °. Njengoba enamathela yangaphandle ingaba amashidi profiled noma ezimise okwama-tile.
Izici ulwelwesi "Megafleks"
Udinga umusi ulwelwesi permeable? Yikuphi okungcono, kudingeka zixazululwe ngaphambi yezitolo. Olunye uhlobo lokudla izinto ezinjalo kuba "Megafleks", okuyinto isakhiwo emithathu ungqimba. Amabili ungqimba yangaphandle - a microperforated futhi isendlalelo kwangaphakathi - ifilimu nakakhulu. anezikhala Ukugxilisa ukunikeza amandla yezinto ezibonakalayo, kanti le yokuvikela ngocwazi kabili emaceleni inikeza ungangenisi amanzi properties.
Indaba ine microperforation iqinisekisa ukupholisa lamanzi umusi uvela ingaphakathi. Lokhu waterproof umusi ulwelwesi permeable uyakwazi ukuvikela isikhala ophahleni kusuka umswakama, uthuli umule, ukuvikela izinto kusukela zangaphakathi nezangaphandle umswakama ukufingqa. Uma udinga ukuvikelwa umoya, kufanele usebenzise uhlobo "Megafleks D 110 ejwayelekile", okuyinto iphuma iphaneli ovundlile nge ukugqagqana ka-15 cm.
Hydro-umusi permeable ulwelwesi waterproof evikela impahla yokulwa umswakama, umoya umusi kufanele khona uphahla ukushisa namakhaza futhi mbumbulu umoya. Esimweni sokuqala, igebe sokuxazulula indlela kontrobreshetki izakhiwo, kanti uma olungaphambili lwesonto ukwahlukanisa igebe ingatholakala by obandayo amaphrofayli ovundlile noma struts.
Chandeliers pripotolochnye: ukwehluka futhi inzuzo
Universal Ukushisa boilers ngoba sasivame ukuyiqhubela emizini yabathile: ukubuyekeza models engcono kanye nokubuyekeza
Lungiselela inhlama mafutha for amadombolo nge amazambane
Njengoba uma uku hacker. Indlela Hack archive livikelwe ngephasiwedi
Abalingisi serial "Scorpio" (Scorpion)
Wonke amakhosi aseRussia ngokuhlelekile (nge-portraits): uhlu olugcwele